चर्चित नायिका केकी अधिकारीको जीवनमा के हुँदैछ यस्तो ? – Gazabkonews
चर्चित नायिका केकी अधिकारीको जीवनमा के हुँदैछ यस्तो ?
काठमाडौँ । प्रमोद खरेलको गीत आफ्नै जिन्दगी आँफैलाई भारी भारीभाको छमा केकी अधिकारीको अभिनयको चौतर्फी चर्चा सुरु भएको छ । आफ्नै जिन्दगी आँफैलाई भारी भारीभाको छमा केकी अधिकारी अहिलेसम्मकै भिन्न भूमिकामा छन् ।
एक कार्यक्रमका बीच उक्त गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको हो । उक्त गीतमा गीतकार धर्मेन्द्र तिम्सिना क्षितिजको उत्कृष्ट शब्द रचनामा पछिल्लो पुस्ताका लोकप्रिय संगितकार रोशन सिंहको उत्कृष्ट संगित रहेको छ । म्युजिक भिडियोमा मोडल सनम कठायतको अभिनय रहेको छ । भिडियोमा सनमसँगै अस्मिता पन्त, सन्कर कोइराला र आबृती कोइरालाको समेत अभिनय रहेको छ ।
विकाश दाहालको सम्पादन , ज्ञानेन्द्र शर्माको छायांकन रहेको उक्त भिडियोको कथाः परिकल्पना मोडल स्वयं सनम कठायतकै रहेको छ भने निर्देशन अन्जन शर्माले गरेका छन्। उक्त म्युजिक भिडियो एभरेष्ट ग्यालरीले बजार व्यवस्थापन र निर्माण गरेको छ । हेर्नुहोस् यो मर्मस्पशी भिडियो